Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii Dhuusamareeb | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii Dhuusamareeb
Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Dalkaan.com) – Guddoomiyaha caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb oo ay hareera joogaan saraakiisha ciidamada amniga ayaa markii u horeysay ka hadlay dagaalkii shalay ciidamo ka wada tirsan dowladda ku dhex-maray caasimada maamulkaas.
Guddoomiye Cabdiraxmaan Geeda Qoroow ayaa shaaciyey inay heshiis kala dhex dhigeen ciidamadii Gorgor iyo kuwa booliska ee shalay iska hor-imaadka uu ku dhex-maray magaalada Dhuusamareeb.
“Ciidamada booliska oo howl-gal ku jira ayay isku dhaceen kuwo ka tirsan Ciidamada Kumaandooska Gorgor, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac,” ayuu yiri.
Waxa uu intaas kusii daray in dagaalkii shalay ay ku dhimatay Haweeney ay rasaasta ugu tagtay gurigeeda, halka ay ku dhaawacmeen labo kamid ah askartii dagaalantay iyo burbur soo gaaray gaadiidka ay rasaasta haleeshay.
Guddoomiyaha caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa ugu dambeyntiina sheegay in baaritaanka kiiska dagaal ee shalay ay u xil saareen maxkamadda ciidamada.
Dagaalka shalay ayaa yimid kadib markii askar ka tirsan ciidanka Gorgor ay weerareen saldhigga booliska ee magaalada, halkaas oo lagu xiray askari ka tirsanaa oo la soo qabtay isagoo cabsan, sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo dhowr ah.
Waxa uu ku soo aadaya iska hor-imaadka dagaal ee u dhaxeeyay ciidamada Gorgor iyo kuwa booliska, xilli ay maalmihii dambe ciidamada Gorgor ay wajahayeen eedeymo la xiriira khal-khal gelin amni.
AC Milan oo Diiday fursad ay kula soo saxiixan lahayd xiddiga...
@Reuters AC Milan ayaa lagu soo waramayaa inay iska diiday fursad ay kula soo saxiixan lahayd weeraryahanka Chelsea Romelu Lukaku xagaagan. Ciyaaryahanka Heerka caalami...
K/ Galbeed oo qabaneyso doorashada 5 kursi – Yaa ku tartamaya?
Farmaajo oo Damacsan Inuu Boobo Kuraasta Xildhibaan Beelaha Waceysle Iyo Murusade...
DF oo jawaab lama filaan ah ka bixisay lacagta ay QM...
Dalkaan.com oo heshay dokumentiga dhisida GOLAHA SARE EE DALKA (Aqriso)
Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Axad...
Afarta musharax ee maanta jeediyay khudbadihii ugu hadal heynta badnaa iyo...
Al-Shabaab oo weerar horleh ka fulisay KENYA, kadibna dab qabadsiisay..
Madaxweyne Xasan oo soo saaray baaq deg deg ah